Dowladda UK oo soo saartay qoraal ku aaddan xaaladda Soomaaliya | Hangool News
April 29, 2021 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:-Dowladda UK ayaa ku baaqday in ammaanka, xasilloonida iyo horumarka Soomaaliya dartood, ay muhiim tahay in la qabto doorashooyin ku dhisan heshiis, sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan.
“Waxaan iminka ugu baaqeynaa madaxweynaha iyo hoggaamiyayaasha dowlad goboleedyada inay deg deg u wada-hadlaan ayada oo aan shuruudo lagu xirin. Waa inay yimaadaan ayaga oo diyaar u ah inay sameeyaan tanaasulaadka lagama maarmaanka ah, kuna wada xaajoodaan niyad wanaag,” ayaa lagu yidhi qoraal kasoo baxay safaaradda UK ee Muqdisho.
“Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan ciidamada amniga ee caasimadda inay ka reebtoonaadaan rabshadaha ayna joogteen xasilloonida. Waa muhiim in ciidamada amniga ay dadaalladooda saaraan ka hor-tagga cadowga guud ee al-Shabaab ayna xaqiijiyaan inaysan ka faa’iideysan hubanti la’aantan siyaasadeed,” ayey tidhi UK.